Nnabata nnabata Cannabis & Iwu Onye ọka iwu na Peoria | Thomas Howard
Mkpụrụ iji ree ọrịre Cannabis- Nrubeisi & Ihe Ndị Achọrọ
Industrylọ ọrụ cannabis ka dị n'oge ọ bụ nwa ọhụrụ, ebe e debere ya iwu na-erughị afọ 20 gara aga. Nke a nwere ike ịpụta na ahịa na-eto ma na-agbanwe n'ike n'ike. Ọ bụ ezie na uto a bụ nke a na - achịkwaghị achịkwa n'oge gara aga, gọọmentị abanyela, ma taa, ụlọ ọrụ cannabis bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha achịkwa.
Site na usoro iwu, nnukwu ndị egwuregwu abatawokwa na ụlọ ọrụ maka na o doro anya na ubi cannabis bụ ụlọ ọrụ na-enye nnukwu ego. Ihe niile na-egosi bụ na ahịa ahụ ga-aga n'ihu na-eto ngwa ngwa, ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ a ga-anọgide na-aghọrọ nnukwu mkpụrụ n'afọ ndị na-abịa n'ihu.
Banyere Mkpụrụ iji
Amalitere mkpụrụ okwu a ga-ere ahịa site na usoro ọchịchị ọhụrụ site na steeti dị iche iche chọrọ ndị na-emepụta ihe iji nyochaa usoro ha. Mkpụrụ nke ire mkpụrụ nke na - enyere ndị na - emepụta ihe aka ịmata kpọmkwem ebe ngwaahịa ha siri bịa na ebe ọ na - aga. Nke a na - enyere aka ịkpa ihe nchịkwa chọrọ ma na - eme ka ọ dịrị ha mfe igbo mkpa ndị ahịa.
N'ihi usoro ndị a, ndị na-azụ ahịa na-enweta ihe ọmụma zuru ezu banyere eriri na ogo n'ozuzu ngwaahịa ngwaahịa. Na mgbakwunye, a na-etinye akpịrịkpa n'ime mkpụrụ ahụ ka ọ bụrụ sistemụ ire iji nyere aka chọpụta usoro achọrọ maka ịgwọ na ijikwa ọnọdụ ahụike dị iche iche.
Ọbụna nke ka mma, sistemụ ahụ na-etinye koodu-akara nke na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ngwaahịa ọ bụla site na mkpụrụ ahụ ruo ọnụ ahịa ya. Nke a pụtara na onye ọ bụla site na ndị ahịa na onye nwe ya nwere ike ikpebi ngwa ngwa ngwaahịa ngwaahịa cannabis ọ bụla ha metụtara.
You chọrọ Onye ọka iwu na-asọpụrụ Cannabis?
Ọ bụrụ na ịnọ na azụmaahịa cannabis ma ọ bụ na-achọ ịbanye na ụlọ ọrụ, ịchọrọ onye ọka iwu na-asọpụrụ cannabis. Ọbụlagodi ma imela nyocha nke zuru oke, ma gụọ ihe niile banyere ụlọ ọrụ; enwere ohere ị nwere ike tufuo nkọwa nke nwere ike imebi azụmahịa gị.
Nyere na iwu cannabis siri dị iche na steeti gaa na nke ọzọ, onye ọka iwu na-agbaso cannabis ga - enyere gị aka ịghọta iwu na ụkpụrụ dị na steeti ebe azụmahịa gị dabere. Ebe ọ bụ na iwu na-aga n'ihu na-agbasa, onye ọka iwu ga-emekwa ka ị nweta mmelite na-eme na ụlọ ọrụ a. N'ụzọ nke a, ị ga - enwe oge dị mfe ịnọrọ n'akụkụ aka nri nke iwu.
Anyị bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke dị na Peoria, Illinois. Aha m bụ Attorney Thomas Howard, m na ndị otu ọka iwu na-aghọta iwu dị na ụlọ ọrụ cannabis. Anyị anọwo na azụmaahịa afọ ole na ole ma nyere ndị nwere azụmaahịa aka na ụlọ ọrụ cannabis ịmalite ma na-eme ka azụmahịa ha.
Anyị dị njikere iduzi gị na usoro ịmalite na ịrụ ọrụ azụmahịa cannabis ma mee ka ị ghọta ụdị mkpụrụ ire nke cannabis bụ ihe niile. Anyị ga-eduzi gị maka otu ị ga - esi tinye mkpụrụ dị na sistemụ ire maka uru azụmahịa gị.
Nwere ajụjụ ọ bụla gbasara azụmaahịa na usoro nchịkwa cannabis? Kpọtụrụ anyị maka ozi zuru ezu banyere nke a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.